Unugyada aasaasiga ah ee ka kooban shabakadda waa Ahraamta saddex-geesoodka ah, prisms-ka saddexagalka ah, xabadaha, Ahraamyada laba jibbaaran ee la jarjaray iyo wixii la mid ah. Cutubyadan aasaasiga ah waxaa lagu dari karaa qaab fidsan oo saddex-xagal ah, afar-geesle ah, gees-geesleyaal, goobaabin, ama qaab kale. Waxay leedahay ...
Mabda'a shaqada ee mashiinka isku-dhafan ee H-beam iyo faa'iidooyinka mashiinka isku-dhafan ee H-beam-ka ee mashiinka wax lagu shirayo: Mashiinka isku-darka tooska ah ee H-beam wuxuu qaataa gudbinta haydaroolka si loo meeleeyo webka iyo baalasha, iyo t .. .
Jir rullaluistemadka alxanka waa aalad gargaar alxanka caadi ahaan loo isticmaalo, kaas oo si ballaaran loo isticmaalo habka wax soo saarka alxanka. Badanaa waxay ku tiirsan tahay khilaafka u dhexeeya alxanka iyo rullaluistemadka firfircoon si loo wado wareegga wareegga alxanka, oo lagu daro weldi ...
Macluumaad loogu talagalay booska alxanka
Dalkeena, booska alxanka waa shey da 'yar. Farqiga u dhexeeya heerka horumarka ee u dhexeeya warshadaha wax soo saarka, saldhigyada alxanka ee shirkado badan ayaan ku qalabaysnayn booska alxanka; isla mar ahaantaana, cilmi-baarista ku habboon waa rel ...
Macluumaad loogu talagalay khalkhalgelinta alxanka
Qalab u diraya madaxa alxanka ama qoriga alxanka booska si loo xiro, ama u dhaqaajiya qulqulka wadada la cayimay ee xawaaraha alxanka la soo xulay Codsiga khalkhalka alxanka: Mashiinka alxanka waxaa loo isticmaalaa mashiinka alxanka, alxamida walxaha, iwm. Shanlo...